Chirahwe: Zvemukati Zvemukati Zvekugadzirwa Zvakagadzirwa Nyore | Martech Zone
China, April 30, 2015 China, April 30, 2015 Douglas Karr
Nemakore ekushambadzira midhiya enhau kumashure kwedu, ndinogara ndichishamisika pandinoenda kunogovana peji paFacebook uye mufananidzo, zita uye zvinyorwa hazvina kugadzirirwa kugovana. Ini ndichanyatso dzivirira maturusi kana vasingatambe nevezvenhau zvakanaka. Zvemagariro enhau zvinoramba zvichingoita yedu enjini yezvinhu zvatinogadzira asi isu tinoziva kuti inofanirwa kutaridzika zvakanaka zvikasadaro vateveri nevateveri vanodarika vachidarika.
Ini ndinoona kuti makambani mazhinji haana hunyanzvi hwekuchinjisa zvemukati manejimendi masisitimu, kana kutowana uye neruzivo rwekuzviita kana vainazvo. Ndipo apo zvishandiso zvakaita Riddle huya zvakanaka. Chirahwe chakatangwa kuita kuti hupenyu huve nyore kune vagadziri venharaunda - nekwanisi yekugadzira, kugovana uye kuyera kukanganisa kwehukama hwako zvemukati kuburikidza neyakareruka, yakajeka dashibhodhi.
Unogona kuona muenzaniso weiyo mota logo infographic takagovana.
Chero zvemukati zveRiddle (senge tsika iyoyo commenticle) inogona kuiswa mune rako peji nekungobaya chete neimwe SEO-inoshamwaridzika HTML. Imwe bhenefiti? Kana yangoiswa - chero nguva iwe kana vashandisi vako paunogovana, hutachiona hwese hutachiona hunodzoka kwauri, uye kwete Riddle.com. Kuti usimbise, ingotinya pane "…" mukona yepamusoro yechinhu cheRiddle, uye kuteedzera / kunama kodhi yeHTML mune rako peji kana kutumira. Heino kodhi yemuenzaniso wedu.
Iyo Shanduko yeMota Logo: Yako Unodisisa?
Zvinonakidza kutarisa mashandiro emota akachinja kuburikidza nemakore - maitiro azvino ndeekusanganisira chimwe chinhu chechidimbu kune chimwe nechimwe, uye zvichave zvinonakidza kuona izvo (ahem) zvichidzika nemugwagwa. Mubvunzo wako - ndeapi eaya marogo emotokari anonyatsotsanangura mhando yavo?
Kugadzira zvako zvemukati zvemukati zvekugovana zvakagadziriswa zviri nyore, kunyangwe pane mbozhanhare sezvinoonekwa muvhidhiyo iyi.
Tags: chirahwezvemukati zvemagarirokugadzirwa kwemagarirosocial sharingmunharaunda kugovana chishandiso
Izvo Zvepamusoro zvinhu zvishanu zvinouraya Mutengi kuvimbika